Faallooyinku miyey beddelaan isku mid? | Martech Zone
Faallooyinku miyey beddelaan isku mid?
Talaado, Oktoobar 14, 2008 Khamiista, Oktoobar 3, 2019 Douglas Karr
Waxaan sameeyay falanqeyn ku saabsan barteyda internetka usbuucaan si aan u raadsado isku xirnaanta natiijooyinka mashiinkeyga raadinta, qoraaladayda ugu caansan ee blogka, qoraalada leh faallooyinka ugu badan, iyo qoraalada dhab ahaan keenay dakhli sababtoo ah la-tashiga ama hadalka ku-biirista.
Ma jirin isku xirnaan.
Dib u eegista qoraaladayda ugu caansan, waxaad kaheli doontaa Foomka Xiriirka WordPress, Bangiyada Huntington Bank, Waxaan ka tagay Basecamp, iyo dhererka Cinwaanka Emailka ayaa qaada taraafikada ugu badan. Qoraaladaasi waxay horseed u yihiin natiijooyinka Mashiinka Raadinta. Qoraaladaasi waxay sidoo kale qaadaan faallooyinka ugu badan. Si kastaba ha noqotee, qoraalladani waxay kaliya bixiyeen lacag yar oo doolar ah (iyo dhowr koob oo bun ah) jeebkayga.
IMHO, adeegsiga faallooyinka sida cabbirka kaliya ee guusha waa wax caadi ah, laakiin waxay u horseedaa badankood baloogyada shirkaduhu way fashilmaan.
Qiyaastii 1 ka mid ah 200kii qof ee soo booqdaba wuxuu ku yimaadaa balooggeyga wuxuuna ka tagaa faallo. Boqolkiiba in yar oo kuwaa ka mid ah waa kuwa sir badan, badankoodna waa dad ehel ah oo aan xiriir shaqsiyeed la leeyahay… aad iyo aadna u yar, haddii ay jiraan, ayaan ganacsi la sameeyaa. Xaqiiqdii, mid ka mid ah qandaraasyadaydii ugu waaweynaa sannadkan la soo dhaafay wuxuu ka yimid qoraal muujinaya xirfadeyda tiknoolajiyad gaar ah (oo si fiican u qiimeeyay), laakiin wax faallo ah kama helin.
Dhibaatadu maaha blogging, dabcan. Waxaan haystaa aqrin badan oo ku saabsan balooggeyga - laakiin waxaan u la'yahay sii wadista inaan si joogto ah ugu qoro waxyaabaha ku saabsan mowduucyada igu beddelaya aniga. Sidoo kale, wax wicitaan ah kama haysto ficilkeyga dhinaceyga.
Waxaan had iyo jeer ku cabiray guusheyda tirada macaamiisha RSS iyo kaqeybgalka (iyada oo loo marayo faallooyinka ku saabsan boggeyga). Waxaan dib uga fakaraa istiraatiijiyaddaas! Haddii aan rabo in aan wado dakhli oo aan uga faa'iideysto sida mareeg ganacsi, waxaan u baahanahay in aan bartilmaameedsado nuxurkeyga si aan ugu guuleysto raadinta shuruudaha la xiriira waxa keena dakhliga. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan bixiyo a wadada boggeyga si aan u qabsado oo aan u cabbiro beddelaadaas.
Anigu ma aaminsani in faallooyinka isku mid loo beddelayo, mana aha inay noqdaan cabbiraadda guusha bartaada.
Ilaa aad si uun ula jaanqaadi karto nashaadaadka natiijada meheradda, waa si fudud qiyaasta waxtarka leh. Taasi maaha in la yiraahdo ma doonayo faallooyin… waa kaliya inaanan u isticmaali doonin faallooyinka tilmaame sida ay u wanaagsan tahay balooggeygu.
Tags: horumarsan baraha bulshadaKartiMichael Stelznerlacag bixinta mobiladaxawaaraha boggaUnsubscribewiqiality
Khubarada Baraha Bulshada ee Barxaddaada!
Oktoobar 14, 2008 at 2:25 PM
Waxaan rabaa in aan noqdo qofka ugu horeeya ee wax ka sheegaya muhiimada ay leedahay faalintu. Farriin weyn!
Oktoobar 14, 2008 at 4:40 PM
Waan ku raacsanahay faallooyinka ma aha cabirka kaliya ee guusha.
Waxaa jira fursad weyn oo lagu horumarinayo sumadda adoo adeegsanaya barta wax lagu qoro. Waxaan nahay shirkad naqshadeynta iyo dhismaha ah oo ku takhasustay kaniisadaha. Waxaan ku kala soocnaa anagoo horumarinayna aqoon dheeri ah iyo aragti dheer oo ku saabsan macaamiisha kaniisadda intay leeyihiin. Blog-kayagu wuxuu noo oggolaanayaa inaan soo bandhigno aqoontaas oo aan la wadaagno kooxaha hoggaaminta kaniisadaha wadahadallo kuwaas oo rajeynaya inay si fiican ugu qalabeeyaan adeegga. Bogaggayagu waxay u dhaqmaan sida qayb ka mid ah istiraatiijiyadeena si aad u awood badan u yeelno.
Waqtigu wuxuu muujin doonaa qiimaha buuxa.